Author Topic: Articles in Nepali - Rachana 2059 Issue 74 (Read 13609 times)
« Reply #10 on: October 07, 2009, 12:48:45 AM »
ृअखवारी पत्रिका, साहित्यिक पत्रिका र व्यङ्ग्य साहित्यका शिखर पुरुष बालमुकुन्ददेव पाण्डेका बारेमा केही लेख्नु सके फलामको च्यूरा चपाएसरह हुनेछ । वि.सं.२०११ सालदेखि ‘दैनिक समाज’ बाट पत्रकारिता क्षेत्रमा हाम फालेदेखि आजका मितिसम्म करिब पचास वर्ष लामो आफ्नो जीवनकालमा बालमुकुन्ददेव पाण्डेले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलाई विकसित गर्न ठूलो योगदान पु¥याउँदै आउनुभएको छ । तर त्यसको समुचित मूल्याङ्कन गर्न कसैले चासो देखाए जस्तो लाग्दैन ।
विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा घटोत्कच शर्मा, फाइँफुट्टीराज, हात्तीगौंडे पुरोहित, बलमकनद आदि उपनाम छद्मनामबाट साहित्यका विविध विधाको श्रीवृद्धिमा मनग्गे योगदान पु¥याउने बालमुकुन्ददेवले ऐतिहासिक साहित्यिक पत्रिका ‘रूपरेखा’को सम्पादकको हैसियतले धेरै लेखकलाई स्थापित हुने अवसर प्रदान गर्नुभो विगतमा । मोहन कोइराला, अभि सुवेदी, मदन रेग्मी, द्वारिका श्रेष्ठ आदि जस्ता अहिलेका लब्धप्रतिष्ठित साहित्यकारहरूलाई स्थापित गराउने र उत्तम कुँवरलाई ‘रूपरेखा’ मा प्रवेश गराउने श्रेय पनि प्राप्त छ उहाँलाई ।
आफू ओझेलमा पर्न सकिने जोखिम मोलेर पनि थुपै्र थुपै्र नयाँ नयाँ साहित्यकारहरूका रचनालाई परिमार्जित, परिष्कृत र पुनर्लेखन गरेर भएपनि ‘रूपरेखा’ मार्फत् कैयन लेखक–कविहरूलाई उहाँले प्रकाशमा ल्याउनुभएको कुरा ‘तर म कहिल्यै साहित्यकार चाहिँ भएनछु’ज्ञ मा उल्लेखित छन् ।
समाज र राष्ट्रप्रति विशेष प्रकारको भूमिका र दायित्व निर्वाह गर्ने कुराप्रति हामीलाई बरोबर सचेत गराउँदै आउनुभएका बालमुकुन्ददेवजीले दुई÷दुई पटक ‘गोरखापत्र’ को प्रधान सम्पादक हुने ऐतिहासिक गौरव मात्र प्राप्त गर्नुभएको छैन । अधिकांशले आराम गर्नुपर्ने र गरिरहेको यो उमेरमा उहाँ अझै ‘राजधानी’ दैनिक पत्रिकामा सक्रिय रूपले प्रधान सम्पादकको दायित्व कुशलतासाथ निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ ।
साहित्यको क्षेत्रमा होस् चाहे पत्रकारिताको क्षेत्रमा होस् सदैव केही न केही नयाँ, ठोस र उपलब्धिमूलक परिणामको लागि मात्र आफूलाई काममा अल्मल्याउँदै आउनु आउनुभएको छ पाण्डेले । ‘चिन्तनको चौतारी’, ‘बादेपाको कलम’ स्तम्भ अन्तर्गत उहाँ आजका मितिसम्म हामीलाई सृजनशीलता र संघर्षको जुन पाठ सिकाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो मामुली ठानेका छैनौं हामीले ।
सर्वसाधारणको बीचबाट देखा परेर माथि उठ्नुभएका (आर्थिक रूपमा हैन) वरिष्ठ पत्रकार बालमुकुन्ददेव स्वस्थ पत्रकारिताको बाहक हुनुहुन्छ । उहाँ यस पंक्तिकारसँगको भेटमा अक्सर भन्ने गर्नुहुन्छ–‘‘बुझ्यौ ज्ञानु साहित्यिक पत्रकारलाई अल्पज्ञानको लाञ्छना कहिल्यै लाग्न दिनु हुँदैन ।’’
साहित्यिक क्षेत्रमा निरन्तर बढ्दो वैचारिक प्रदूषणको लागि चिन्तित, अग्रगामी सोचका धनी तर शालीन स्वभावका बालमुकुन्ददेव पाण्डेले देश विदेशको यात्रा गरेर सँगाल्नुभएका अनुभवलाई साहित्य र पत्रकारितामा लगानी त गर्नुभो तर त्यसको कुनै प्रतिफल चाहिँ पाउनुभएन, पाउनु भएन होइन चाहनु नै भएन भनौं ।
अनेकौं प्रयास र आग्रहपछि उहाँका निकटतम मित्र पदम ठकुराठी र सुपुत्री कल्पना पाण्डेका रोहवरमा बालमुकुन्ददेव पाण्डे जस्ता स्वाभिमानी, बहुआयामिक प्रतिभासित भएको कुराकानीको यो सार संक्षेप पाठकहरूका लागि ज्ञानवर्धक, रोचक र प्रेरकसमेत हुने विश्वास लिएको छु । – ज्ञानुवाकर े
देशको वर्तमान साहित्यिक र अन्य सांस्कृतिक गतिविधिसित सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
छैन, हाम्रो संस्कृतिउपर अनेकौं कोणबाट आघात उपस्थित छन् । नेपाली संस्कृति जसरी अधोगतितिर लागिरहेछ, त्यो साँच्चि नै चिन्ताको विषय हो । साहित्यिक पत्रिकाले नेपाली साहित्य र साहित्यको विकासमा जति योगदान दिन सक्नु पथ्र्यो दिन सकेको देखिँदैन । पाठकहरूपनि निकै कम छन् । यस्तोमा नेपाली साहित्य टाक्सिनु र मधौरो जस्तो देखिनु स्वाभाविकै हो । यस्ता विसंगतिहरूसित सहमत अथवा सन्तुष्ट हुनु आफ्नो घुँडामा बन्चरो हान्नु जस्तै हो
साहित्यिक पत्रिका कत्तिको पढ्नुहुन्छ ?
चित्त कटक्क कुँडिन्छ !
किन ? तपार्इंंको पालाको साहित्यिक पत्रकारिताको दाँजोमा अहिलेको साहित्यिक पत्रकारिता स्तरीय नलागेर ?
हाम्रो पालामा साहित्यकारहरू अहिलेको जस्तो विभिन्न राजनीतिक दलको खेमामा बाँडिएका थिएनन् । साहित्यिक पत्रिकाका सम्पादकहरू मिहिनेती थिए । लेखक कविहरू पनि पारिश्रमिक नपाए पनि मिहिनेत गर्थे । नेपाली साहित्यले प्रगतिको मूलबाटो नभएपनि गोरेटो सम्म पहिल्याइसकेको थियो । तर अहिले त साहित्यइतर पत्रिकाले पो विकास गरेको छ । मुद्रण प्रविधिको विकासबाट साहित्यिक पत्रिकाले लाभ उठाउन सकेन ।
हाम्रो मुलुकमा अखबारी पत्रकारितालाई चाहिने भन्दा बढी महत्व दिएर नै यसो भएको हो कि ? तपाईंले पनि अखबारी पत्रकारितालाई नै बढी महत्व दिनुभयो । नढाँटीकन भन्नुस् त ! साहित्यिक पत्रकारिता र अखबारी पत्रकारिता मध्ये कुनमा बढी आत्मसन्तोष मिल्यो तपाईंलाई ?
साहित्यिक पत्रकारितामा लागेर बढी गुमाइयो । तर अखबारी पत्रकारिताको सिलसिलामा भने विश्वका करिव ३० वटा मुलुक घुम्न पाएँ । साहित्यिक पत्रकारको हैसियतले चाहिँ स्वदेशका केही भाग मात्र डुलियो । अझ अंग्रेजी भाषाको पत्रकार भएको भए बढी फाइदा उठाउने थिएँ कि !
तपाईं प्रेस काउन्सिलबाट २०५४ सालमा पुरस्कृत र अभिनन्दित हुनुभयो । सोही वर्ष फागुनमा हास्यव्यंग्य क्षेत्रमा ‘घटोत्कच शर्मा’ उपनामबाट योगदान पु¥याएबापत् ‘भैरव अर्याल पुरस्कार’ पाउनुभयो । के अखबारी पत्रिकाबाट पाएको सन्तुष्टि भन्दा यी कुरा कम सन्तोषजनक हुन् त ?
पक्कै पनि होइनन् । कुनै जमानामा म आफैं पनि प्रेस काउन्सिलमा थिएँ । मैले साहित्यिक पत्रकारिता र साहित्यको पक्षमा त्यसबेला केही गर्न नसकेपनि त्यही प्रेस काउन्सिलबाट २०५४ सालमा एक साहित्यिक पत्रकारका रूपमा आफू सम्मानित हुनु मैले ठूलो उपलब्धि र गौरवको कुरा ठानेको छु । त्यस्तै भैरव पुरस्कारका लागि पनि कृतज्ञ छु । त्यो बेलाका प्रेस काउन्सिलका सदस्य रोचक घिमिरे र भैरव पुरस्कार गुठीका पदाधिकारीहरूप्रति यस निम्ति म आभारी छु ।
तपाईं आफैं प्रेस काउन्सिलको सदस्य हुँदा एक वरिष्ठ पत्रकार र साहित्यकार दुुवै हुनुको नाताले आफ्नो व्यक्तित्वको ‘प्रभाव’ देखाएर साहित्यिक पत्रकारिताको लागि केही गर्नसक्नुु हुन्थ्यो, तर गर्नुभएन किन ?
यसो भएन, उसो भएन भनेर कसरी भनूँ ?
कुनै जमानामा तपाईंले हस्त–लिखित पत्रिका निकाल्नुभएदेखि ‘रूपरेखा’ जस्तो ऐतिहासिक महत्वको पत्रिकासम्मको आफ्नो साहित्यिक पत्रकारिताका पु्राना दिन सम्झँदा अहिले कस्तो लाग्छ ?
कुनै जमानामा हस्तलिखित मासिक पत्रिका ‘प्रभात’ निकालियो । त्यो मेरो लहड थियो । केही सीमित व्यक्तिले मात्र पढ्न पाउँथे । मिहिनेत चाहिँ उत्तिकै गर्नुपथ्र्यो । त्यो मिहिनेत सम्झँदा अहिले हाँसो उठ्छ । मुद्रित साहित्यिक पत्रिका निकाल्न पनि उत्तिकै सक्रिय थिएँ । तर आर्थिक कमजोरीले दर्ता गरिसकेको ‘जुनकिरी’ द्वैमासिक निकाल्न सकिन । कवि भूपी शेरचनको अस्वस्थताले त्यो प्रकाशित हुन नसकेको हो । पछि राष्ट्रिय पुुुस्तकालयले ‘रूपरेखा’ निकाल्ने भएपछि मलाई प्रेस व्यवस्थापक बनायो । दुई अङ्क निस्किएपछि त्यसमा लागेकाहरू सबै लाखापाखा भए । म र योगेन्द्रनाथ अर्यालले जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्नुेपरेपनि ‘रूपरेखा’को प्रकाशनलाई नियमित रूपले अघि बढाउने निर्णय ग¥यौं । पछि उत्तम कुँवर पनि ‘रूपरेखा’मा प्रवेश ग¥यो । त्यसबेला साहित्यिक पत्रकारिताको आफ्नै इज्जत एवं प्रतिष्ठा थियो । हामी अति मिहिनेत गथ्र्यौं । त्यसबेलाको कुरा सम्झँदा अहिलेपनि निकै उत्साह पैदा हुन्छ । लेख–रचना बटुल्न लेखकहरूको ढोका धाउँदा अनि त्यो पाउँदाको आनन्द आफ्नै किसिमको थियो । प्रेसमा म्याटर पठाएर कम्पोज गर्न लाउनु, प्रुफ हेर्नु, पत्रिका तयार भएपछि त्यसलाई वितरण गर्नु जस्ता सबै अभिभारा बोकिन्थ्यो । ‘रूपरेखा’लाई नियमित निकाल्न र ठाउँठाउँमा पु¥याउनुको मजा आफ्नै किसिमको थियो । छोटो अवधिमा पत्रिका निकै लोकप्रिय हुन पुगेको थियो । त्यसबेला साहित्यिक पत्रकारिता भर्खरै शुरुको अवस्थामा थियो । र त्यसमा लाग्नु रहरकै विषय थियो । पत्रिका निस्कन्थे र केही समयपछि ती बन्द हुन्थे । यसले गर्दा नियमित रूपले पत्रिका निकाल्न चाहनेहरूले समेत निकै कठिनाईको सामना गर्नुपथ्र्यो । तर हामी कहिल्यै निराश भएनौं ।
फेरि साहित्यिक पत्रकारिता शुरु गरौं जस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ?
लाग्दैन, त्यसतर्फ लाग्न चाहनेहरूलाई प्रोत्साहन दिन पनि मन लाग्दैन । तथापि स्तरीय साहित्यिक पत्रकारिताको आवश्यकता भने छ ।
छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त–‘रूपरेखा’को जन्म हुनु र फस्टाउनुमा कसको बढी हात थियो । उत्तम कुँवरको कि तपाईंको ?
बढी र घटीको कुरा नगरौं । दुवैको समान हात थियो । हाम्रा बीच पारस्परिक समानता थियो । राम्रै भएको थियो; तर उत्तम र मेरा बीचको मित्रता केही व्यक्तिलाई सह्य भएन क्यारे ! तिनैले हामीलाई फुटाएका हुन् । तिनको नाम म बताउन चाहन्न ।
रूपायन प्रेसको आन्तरिक व्यवस्था र ‘रूपरेखा’ को स्थायित्वमा तपाईंको अनुभव र योगदानलाई उत्तम कुँवरले आफ्नो संस्मरणका अनेक ठाउँमा उल्लेख गरेबाट उनले तपाउँको गुन र महत्वलाई नबिर्सेको देखिएन र ?
भनिहालें नि; उत्तम र मेरा बीचको समझदारी एवं मित्रताप्रति असहिष्णु तत्वले हामीलाई फुटाउने काम ग¥यो । त्यसबारे अब अरू धेरै नकोट्याउँ ज्ञानुजी !
‘रूपरेखा’ बाट अलग हुनुमा वासुदेव लुइँटेलको पनि हात रहेको कुरो तपाईंले आफ्नो लेख–‘माड्साबको शतायु होस्’द्दमा उल्लेख गर्नुभएको रहेछ ।
वासुदेव माड्साबप्रति मेरो कुनै द्वेष छैन । उत्तम र मलाई फुटाउनुमा अरु नै तत्व थियो । मलाई ‘रूपरेखा’बाट सरक्क पन्छिन मात्र वासुदेव माड्सावकोे सहयोग लिइएको हो । तपाईं किन यस्तो खोतलखातल गर्नतिर लाग्नुभएको हँ ? छोडिदिनुस् ज्ञानुजी ती कुरा ! उत्तम र मलाई फुटाउनेले कुनै फाइदा गरेनन् । बरु ऐतिहासिक महत्व बोकेको एउटा साहित्यिक पत्रिकाको हत्या गर्ने काम मात्र गरे । म कहिलेकाहीं जोशिन्छु वास्तविक कुरा सबै छ्यालब्याल गरिदिउँ कि भनेर । तर म आफू सहनाई जस्तो भएकोले बच्छी–बाजासँग निहुँ खोज्नु मनासिव नभएकोले स्वतः खुम्चिन पुग्छु ।
साहित्यिक पत्रकारिता गर्दाका घतलाग्दा कुनै तीतामिठा प्रसङ्ग भए बताइदिनुस् न !
थुप्रै छन् त्यस्ता प्रसङ्ग । एकताका यस्तो समय पनि आयो जब ‘रूपरेखा’ र शङ्कर लामिछानेको नाम अन्योन्याश्रित बन्न पुग्यो । उहाँको निबन्ध वा हाइकु कविता छाप्न पाइयो भने रूपरेखाको बाह्रपन्ध्र सयप्रति बढी बिक्थ्यो । त्यसैले हामी उहाँको पछि लाग्यालाग्यै गथ्र्यांै । शुरुमा उहाँ जनसेवा सिनेमाहलसँग सम्बद्ध हुनुहुन्थ्यो । पछि कहिले क्यूरीयो पसलमा बस्न थाल्नुभयो, त कहिले नेपाल भारत सांस्कृतिक केन्द्र वसन्तपुरमा । उहाँको लेख लिन रामं्रो पारिश्रमिक दिनुपथ्र्यो । साँझ उहाँलाई अफिसमा बोलाएर मदिरापान गराउनु पथ्र्यो । उहाँ अति सौखिन हुनुहुन्थ्यो । पैसाले जहिलेपनि हाहा र स्यूस्यू पथ्र्यो उहाँलाई । एउटा लेख लिन कति धाउनुपथ्र्यो हामीलाई थाहा छ । अर्का कवि हुनुहुन्थ्यो हरिभक्त कटुवाल । उहाँ पनि त्यत्तिकै पियक्कड तर गीत र कविता साहै्र राम्रो लेख्ने । यति त मान्नै पर्छ उहाँले ‘रूपरेखा’को निम्ति निकै परिश्रम गर्नुभयो । एकेडेमीको सदस्य बनाउने आश्वासन राजा महेन्द्रबाट पाएपछि स्वास्नी–छोराछोरी लिएर कटुवालजी स्थायी रूपले काठमाडौं बस्न आउनुभयो, तर अलपत्र पर्नुभयो । ‘रूपरेखा’ को कार्यालय शुरुमा मेरै घरमा थियो । जुद्धसडकको नजिकै पर्ने भएकाले लेखक कविको जमघट भैरहन्थ्यो । दिउसो चिया र चुरोटको त साँझ रक्सीको दौर चल्थ्यो । बढी खर्च मेरै हुन्थ्यो । श्रीमतीको सधंै कचकच सुन्नुपथ्र्यो । भैगो, गएको कुरालाई छोडिदिनु नै राम्रो ।
तपाईंलाई त्यस दौरान कोको कवि लेखकहरू मन पर्थे ?
मन पर्ने कवि लेखकहरू थुप्रै थिए । तर कोही यस्ता पनि थिए, जो सधंै कचकच मात्र गर्थे । लामालामा कविता र कृतिहरू सुनाउथे । फुर्सद छैन, अहिले छोडेर जानुस्, पछि पढौंला भनेर सुख नपाइने । बैरागी काइँला, तुलसी दिवस जस्ताले कविता सुनाउँदा मनै रमाउने । कोही कोही त साह्रै घमण्डी खालका कवि–लेखक पनि थिए ।
को थिए ती घमण्डी लेखकहरू ?
नाम किन लिने ! तर त्यस्ताहरूलाई म पटक्कै मन पराउन्न थिएँ ।
मोहन कोइरालाको कवि व्यक्तित्वको विकास पनि ‘रूपरेखा’बाटै भएको हो क्यारे !
हो, तर ‘रूपरेखा’मा छापिएका मोहन कोइरालाका शुरु शुरुका कविता हामी ‘प्रगति’का सम्पादक नारायण बाँस्कोटा मार्फत् पाउने गथ्र्यांै । त्यसबखत उत्तम कुँवर ‘रूपरेखा’मा छँदै थिएन ।
मतलव ‘प्रगति’मा अस्वीकृत भएका रचनाहरू तपाईंकहाँ पठाइदिने गरेको त होइन ?
कुन्नि ! यसै भन्न सकिन्न । तर पछिपछि चाहिँ उहाँका जतिपनि कविता ‘रूपरेखा’मा छापिए, तिनमा अधिकांश उहाँ कार्यालयमै आएर मलाई नै दिनुहुन्थ्यो । तर मोहन कोइरालाले केही महिना अघि कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा भन्नुभएछ–‘‘मेरो शुरुशुरुका कविताहरू उत्तम कुँवरले छाप्नुभएको हो....।’’ एकदिन बाटोमा उहाँसँग भेट हुँदा मैले उहाँलाइ वास्तविकता याद दिलाउन खोज्दा–‘‘ए, मलाई त्यो त यादै भएन !’’ भन्नुभयो ।
देशविदेशका साहित्य कत्तिको 
« Reply #11 on: October 07, 2009, 12:49:43 AM »
देशविदेशका साहित्य कत्तिको पढ्नुहुन्छ ?
समयले भ्याएसम्म पढ्छु ।
नेपाली साहित्यलाई विश्व साहित्यको दाँजोमा कहाँ पाउनुहुन्छ ?
कुनै बेला नेपाली कविता विश्व साहित्यका हाराहारीमा पुगिसकेका थिए । अब त्यो अवस्था रहेन !
त्यो नसोध्नोस् ।
तपाईंका परिवारमा कसैले साहित्य र सहित्यिक पत्रकारितामा रुचि देखाए तपाईं प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ कि हतोत्साहित ?
मेरा माहिला बुबा स्व. नरदेव पाण्डे मोतीराम भट्टका कवि मण्डलीका सदस्य हुनुहुन्थ्यो । गोरखापत्रको संस्थापक (संपादक र प्रकाशक) हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि हाम्रो परिवारमा म बाहेक नेपाली साहित्यमा लाग्ने अरु कोही देखिएनन् । स्पष्ट छ, भुक्तभोगीको नाताले मैले परिवारका अरु कुनै पनि सदस्यलाई त्यसतर्फ लाग्न प्रोत्साहित गरिन । कान्छी छोरी तर्फको नाति अशेष आचार्य भर्खरै छैटौं श्रेणीमा पढिरहेछ, ऊ राम्रो कविता लेख्छ । तर नेपालीमा होइन अंग्रेजीमा । मैले उसलाई नेपालीमा लेख भन्न सकेको छैन ।
अहिलेसम्मको आफ्नो जीवनक्रमलाई निराशाजनक रूपमा लिनुभएको छ कि उपलब्धिमूलक ठान्नुभएको छ ?
मेरो साहित्यिक पत्रकारिताको समाप्ति त्रासदीपूर्ण रहेतापनि सामान्य पत्रकारितामा बितेको जीवन त उल्लेखनीय नै रहेको छ । चाहे त्यो उपलब्धिमूलक नरहेको किन नहोस् ।
जिन्दगी कसरी बित्दैछ ?
एक किसिमले निष्कृय जस्तै छ – २÷३ वटा पत्रिकामा स्तम्भ लेखनको काम बाहेक । तै पनि मेरो निष्कृयताप्रति धेरै इष्टमित्रहरू असन्तुष्ट पनि छन् । केही न केही त गर्नुप¥यो भन्छन् । तर म मुढो जस्तो अचल भएर लडिरहेछु ।
तपाईं हामीहरू यसरी निष्कृय र तटस्थ भैदिनाले नै समाजमा अनेकौं दुर्जनहरूले टाउको उठाउँदैनन् ?
हो, म मान्छु । आज देशका बुद्धिजीविहरू समाज र देशप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुरामा उदासीन छन् । त्यसैले अनेकौं विकृति एवं विसङ्गतिहरू जन्मिन पुगेका हुन् । यद्यपि यो देशमा तपाईं हामी जस्ता बुद्धिजीविहरूको सक्रियता वा निष्कृयताले केही नापिनेवाला छैन । हामीले गर्ने नै के ? नैतिकता र इमानदारीले नेटो काटिसकेको यो बेलामा हामीले सक्रिय हुन खोज्दा राजनीतिज्ञलाई मन पर्दैन । उनीहरूको भाग खोस्न आएको जस्तो गर्छन् ।
छुट्टिनु अघि तपाईंका भन्नुपर्ने बाँकी केही कुरा भए........
...छैन । शायद बढी नै भनें जस्तो लाग्यो । भन्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद ज्ञानुजी !
ज्ञ ‘मञ्जुूषा’ द्वैमासिक, वर्ष २ अङ्क २, साउन–असोज २०५७
द्द ‘वासुदेव लुइँटेल आधुनिक दधीचि’–सम्पादक शेषराज सिवाकोटी, पृष्ठ १४१
« Reply #12 on: October 07, 2009, 12:50:20 AM »
म हाँस्छु है रोचकदाई !
श्री रोचक घिमिरेज्यू,
आदरणीय रोचक दाइ !
दाजुको सौजन्यले मैले फागुन–चैत २०५८ को रचना पाएँ र पढें पनि । वास्तवमा नेपालमा साहित्यिक पत्रिका पढ्न पनि धेरै कसरत गर्नुपर्ने भयो । निजी क्षेत्रबाट ‘रचना’ र ‘अभिव्यक्ति’ले जुन खुराक पस्कन्छन् अन्य प्रायः पत्रिकाहरू एउटा एउटा झण्डा लिएर हिँडेको हुँदा भरिसक्य त्यस्ता पत्रिकाहरू म मेरा घरभित्र नपसोस् नै भन्छु ।
मैले ‘रचना’को यसपालिको अङ्कका प्रायः सबै लेखरचना पढें । ती मध्ये मेरो पहिलो दृष्टि राजेश्वर देवकोटाकृत ‘‘एक साहित्यिक गफ’’ मा पुग्यो । त्यस प्रकारको लेख मैले लेख्न पाएको भए त्यसको शीर्षक म चाहिँ ‘‘परिश्रम’’ राख्थें होला । किनभने मेरा श्रद्धेय गुरु राजेश्वर देवकोटाज्यूले रमेश खकुरेलको टेलिफोन नम्बर पत्ता लगाउन ठूलै कसरत गर्नुभएको रहेछ ।
देवकोटाज्यूको लेख पढेपछि मैले पुनः नइ टेलिफोन कोश पल्टाएँ । हो रहेछ, नइ टेलिफोन कोशमा एउटा वरिष्ठ कवि रमेश खकुरेलको टेलिफोन नम्बर प्रवेश भएको नै रहेनछ । शायद देवकोटाज्यूले झैं मैले पनि उहाँको नम्बर सहज रूपमा पाउन सकिँन पनि होला । व्यक्तिगत रूपमा खकुरेलसंगको सम्बन्ध नहुनु र नइ टेलिफोन कोशका अर्का एउटा स्रोत भूतका भिनाजू पनि भएको हुँदा खकुरेलको ‘धन्वन्तरी’ कालकै टेलिफोन नम्बर मैले प्राप्त गरेको थिएँ पनि हुँला । त्यसैले रङ् नम्बर हुनुभन्दा कुनै नम्बर नहुनु नै मैले उपयुक्त ठानेको पनि हुन सक्छ ।
अबको नइ टेलिफोन कोशको तेस्रो संस्करणमा राजेश्वर देवकोटाज्यूको परिश्रमले प्राप्त खकुरेलको नम्बर पनि रहन्छ । वास्तवमा नइ प्रकाशन सांस्कृतिक मामलामा पूर्वाग्रही छैन । भँगेरीको हकमा चाहिँ ती बाहुनले आफ्ना घरमा कहिले कसको नम्बर ल्याएर जोड्छन् कहिले कसको नम्बर ल्याएर पनि केही दिन राख्छन् । त्यसैले प्रायः स्रष्टाहरूले भन्ने गरेका छन् ‘भँगेरीको नम्बरमा फोन हान्यो कहिले हाँडीगाउँ पुग्छ, कहिले मालीगाउँ पुग्छ ।’ त्यसैले छेपारोका रङ् जस्तो फेरिइरहने टेलिफोन राख्दा त्यो पनि फेरि रङ् नम्बर होला भन्ने पिर भयो । त्यसैले भँगेरी आउट भएको हुन पनि सक्छ ।
कमल दीक्षितज्यूका विषयमा देवकोटाज्यूले मेरो भनाईलाई उद्धृत गर्दै कमलमणि लेख्नुभएछ । उहाँलाई म कहिले कमलमणि भन्दिन थिएँ । उहाँलाई मैले सम्बोधन गर्ने नाउँ कमल बाबू या कमल दीक्षित मात्रै थियो ।
अर्को कुरा राजेश्वर देवकोटाज्यूले यो लेखमा लेख्नुभएका गन्थनमा एउटा शब्दले मलाई च्याप्पै समायो । ‘‘साहित्यकारहरूको बाझाबाझबाट रसको सृष्टि हुन्छ र अरूको बाझाबाझबाट रक्तको वृष्टि हुन्छ ।’’ यति महान् विचारका मान्छेले राजनीतिको घृणित सीमाबाट उक्लेर चौबीसै घण्टा कलम कापी समात्नुभएमा नेपाली साहित्य कति धन्य हुन्थ्यो होला ?
म पहिला पहिला खुबै हाँस्थें । तर देशमा जब बहुदलीय प्रणाली भित्रियो त्यसपछि मेरो हाँसोमा ताल्चा लागेको मलाई महसुस भएको छ । मेरा नेता, मेरा गुरु र मेरा पे्ररक व्यक्ति राजेश्वर देवकोटाले मलाई हाँस्दैन भन्नुभएको बेहोरा पुनः मेरा छातिमा खेल्न थाले । देश बहुदलको कालो धन्द्रोमा जाक्किएर मरणासन्न भएको बेला पनि नरेन्द्र हाँस्दैन भन्नुहुन्छ भने अब म धक फुकाएर हाँस्ने गर्छु । वास्तवमा मैले हाँस्ने बाटो खोजेरै बसिरहेको पनि थिएँ, अब बाटो खुल्यो, म हाँस्छु है रोचक दाइ !
२०५८ चैत २९ गते
शुभ चिताउने भाइ
« Reply #13 on: October 07, 2009, 12:53:00 AM »
नेपाल र नेपालीहरूका निम्ति असह्य अनिष्टकारी भएर बित्यो २०५८ साल ! त्यो वर्षले पछि परन्तुसम्म बिझाइरहने एउटा घाउको खाटा छोडर गयो नेपालीहरूलाई !
अब २०५९ सालको नयाँ घाम झुल्किएको छ । औपचारिकता निम्ति यो नयाँ वर्ष सुखद होस् भनेर आपसमा शुभकामना बाँड्ने परम्परा हामीले पनि निर्वाह गर्नै पर्दछ । त्यही परम्परा धान्दै समस्त देशवासी सहित आफ्ना पाठकहरूमा नववर्षको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं हामी । तर वास्तवमा के हाम्रो निम्ति यो नयाँ वर्ष पनि सुखद होला त ? जसरी गएका वर्षहरू नेपाल र नेपाली निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण ठहरिए, यो आएको नयाँ वर्षले पनि नेपाली जनजीवनमा पहिलेभन्दा कुनै भिन्नता ल्याउला भनेर पत्याउने कसरी ?
नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हालत यो वर्ष झन् दयनीय, झन् जर्जर, झन् भयावह हुँदै जाने लक्षण टड्कारै देखिएको छ । यसो भनिएको किन भने नेपाल हाँक्ने हात उही हुन्, नेपालीका भाग्यविधाता भनिएका अनुहार तिनै हुन्, नेपालको राजनीतिक अन्दोलनका कथित कर्णधार उनै हुन् ! तिनको छत्रछायाँमा आज राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको विकास कसरी भइरहेछ ? यो हामी सबैका सामू छर्लङ्ग छँदैछ !
नैतिकता गुमाएका, भ्रष्टाचारशिरोमणि भनेर गन्हाएका, नेपाल आमाका केही कपुूत सन्तानहरूको उन्मूलन जबसम्म हुँदैन, तवसम्म नेपाल र नेपालीका सुदिन आउँदैनन् । राष्ट्रलाई खोक्रो पारेर मक्याउने धमिरा यिनै केही भ्रष्ट सत्ताधारी र तिनका मतियार राजनीतिकर्मीहरू हुन् भनेर जान्दाजान्दै पनि जनताजनार्दन अझै तिनका विरुद्ध जुर्मुराएका छैनन् । नेपाली जनताको सहनशीलताको पराकाष्ठा नै मान्नुपर्दछ यसलाई !
मुलुकका नीति निर्माता, नेता र उच्च ओहोदाधारी शासनकर्ताहरू यसरी भ्रष्टाचार र अनैतिकताको दुर्गन्धे भासमा घाँटीसम्म डुबेका देखेर पनि हामी असहाय भएर टुलुटुलु तिनका अगाडि सधंै आज्ञाकारी मुद्रामा उभिइरहन्छौं भने हामी नेपालीहरूका सुदिन कहिल्यै आउने छैनन् ।
यस विकराल स्थितिमा राष्ट्रिय चेतनाका सम्बाहक मानिएका साहित्यिक, बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको काँधमा ठूलो जिम्मेदारी आएको छ । यस राष्ट्रलाई खोक्रो पार्ने धमिराहरूको उन्मूलनका निम्ति जागृतिको ज्वार उराल्न अब तिनले शंखघोष गर्नै पर्दछ । भ्रष्ट र अनैतिक शक्ति जतिसुकै बलियो भएपनि स्रष्टाका विप्लवी हुँकारका अगाडि टिक्न सक्तैन । नेपाल मात्र होइन संसारकै इतिहासले यही देखाएको छ ।
नैतिक, चरित्रवान् र सुसभ्य शासन ल्याएर राष्ट्रलाई उन्नतिशील बाटोमा हिंडाउन अब यस नयाँ वर्षमा सम्पूर्ण वाङ्मयिक व्यक्ति र संस्थाहरूले व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा एउटा सशक्त अभियान–सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक भएको छ । भ्रष्ट र अनैतिक भनेर जनताले औंलो ठड्याएका मुलुकमारा ओहोदाधारीहरूलाई आफ्ना कुनै पनि कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि, अतिथि नबनाउँ, तिनलाई मञ्चमा नराखौं । तिनीहरू उपस्थित हुने कार्यक्रम बहिष्कार गरौं । राष्ट्रव्यापी रूपमा यो अभियान चलाउँ । स्रष्टाहरूको यस्तो अभियानले राष्ट्रलाई पतनोन्मुख गराउन जिम्मेदारहरूलाई दण्डित गर्न जनजनमा चेतनाको लहर उराल्ने छ । नयाँ वर्ष २०५९ ले जनतामा त्यस्तो चैतन्य ल्याउन सफलता पाओस् अहिलेलाई यस्तै शुभ–भावना व्यक्त गर्नु नै सार्थक ठहरिएला !